Nezvedu - Cangzhou ASC toner kugadzirwa Co, Ltd.
Cangzhou ASC toner kugadzira Ltd, yakagadzikwa munaKurume, 2003.
Iyo yakakwira-Tech compamy yekugadzira printer uye Coper toner, toner cartridge uye imwe hofisi inodyiwa.
Semumwe wemagadzirirwo akakurisa uye mutengesi wezvinhu zvinoshandiswa pamahofisi, ASC yakavaka R & D yakakwana uye yekuongororesa marabhoritari .Ina muridzi weR & D timu kugadzira zvigadzirwa zvitsva. Takabudirira kuburitsa zvigadzirwa zvedu "ASC" "语 印" "艾斯克" "Aisk" etc.MUNA 2019, isu nzira nyowani ye "Nyama nzira yerudzi ruvara uye nzira yavo" inobudirira kunyorera patent muhofisi yehuchenjeri midziyo hofisi, uye yakagadzira isina chinhu mumutsetse uyu.
Isu tinogara tichitarisa pamusoro pekudzora kwemhando uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye ndokutanga kutungamira ISO9001 yemhando zvitupa mumunda uyu. Sezvo riri bhizimusi rinotungamira, isu takatora chikamu mukunyora "National standard of toner". Mugore ra2007 abd 2014, vese kambani uye zvigadzirwa zvinowana rukudzo rwe "yepamusoro-tech bhizinesi reHebei province" uye "yepamusoro-tech chigadzirwa cheHebei province".
Isu tinogara tichivimba "Hapana chakanyanya kunaka, chiri nani chete!" Sekuyera kwekuvandudzwa kwemabhizinesi, uye kutariswa kwekambani ”Gadzirisa uye Shongedza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro 'Uye" Tsvagiridzo nekusimudzira zvigadzirwa zvitsva "sematanho ekubudirira, kuitira kuti zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvive zvinokurumidza. zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogona kuve zvakanyanya kupfuma, pamwe chete neyakakwana mushure-yekutengesa basa kuwana inosimudzira uye yakagadzikana bhizinesi.
Yedu yekuburitsa mwaka inosvika zviuru zvitatu zvematani toner, 800,000 pcs cartridge, 9 miriyoni ribhoni, toner mhando dzinofukidza koper uye laser printer zvese zvigadzirwa zvinogamuchirwa nehunyoro muEurope 、 Africa 、 Southeast Asia.
Cangzhou ASC Toner Production LTD yakatangwa.
Muna2004, kukoshesa kwatinoita kambani ”kuwedzera bhizinesi, kuvandudza mufananidzo wekambani, kutarisisa kugadzirisirwa zvigadzirwa”, nekudyara mari yakawanda kuwedzera huwandu hwekugadzira. Nzvimbo nyowani yekambani pasi nzvimbo inopfuura zviuru makumi maviri neshanu emamirimita .singaverengeki toni itsva yekugadzira dhiza, toner kurongedza shopu, uye kuwedzera mana maficha ekugadzirwa ane advanced advanced level.Zvakaburitswa zvinosvika mazana matanhatu ematani.
Zvekare muna 2007 vakadyara zvinopfuura mazana matanhatu emamirioni RMB, kuwedzera kwemitsara miviri yekugadzira, huwandu hwegore rose rekugadzira rinowedzera kusvika pamatani gumi nemaviri
Muna2009, tadzika 1400 miriyoni RMB kuti tivake maviri akaenzanisirwa musangano, maviri ekuchengetera dzimba, uye yakawedzera toner cartridge purojekiti.Annual yekugadzirwa yekusvika inosvika zviuru gumi nemazana emazana ematani uye mazana mazana mapfumbamwe emazana emabhokisi emabhokisi.
Muna2009, nzira yedu nyowani ye "Nyama nzira yemuvara wakaoma uye nzira yacho" yakakwanisa kunyorera patent muHurumende yeInternational Property Office., Ndokugadzira isina chinhu mune uyu mutsara.
Muna 2010, kambani yakaunza nyika dzepamberi yekugadzira tekinoroji, uye yakawedzera mitsara yekugadzira, kuburitsa kwegore kune toner kunosvika kune zviuru zvitatu, uye kwematoni cartridges anosvika 800000 pcs.We mumwe wevanogadzira vashoma vane mukana pf ekugadzira maviri toner uye toner cartridge pamwechete .
Muna 2011 yakakwira mitsara mina yechigadzirwa zvakare, toner pagore rekugadzira simba kubva pamatani 1800 yakakwira kusvika pamatani zviuru zvitatu.
Muna 2018, zvigadzirwa zvedu zvakaverengerwa semhando yepamusoro zvigadzirwa mudunhu reHebei neHebei province Bureau yemhando yepamusoro uye yehunyanzvi kutariswa.
Muna 2018, ASC yekutanga mhiri kwemhiri- bazi reRussia rakagadzwa muMoscow